Ukuzilolonga ebusweni. Funda ukuhlala umncinci | Amadoda aQinisekileyo
Kuqhelekile ukuva kwindawo yokwenza umthambo ukuba uqeqesha umzimba wakho, kodwa ubuso abunakho ukutshintsha. Nangona umxholo wayo uyinyani, ewe sinokuwuguqula umba esiwubonisayo. Ukwenza oku, sisebenzisa i umthambo wobuso. Imalunga nokusebenzisa izihlunu zobuso ngokuthe chu ukuguqula ukubonakala kobuso bethu ekuhambeni kwexesha. Njengoko sikhula, siqaphela ukurhawuzelela, imibimbi kunye nezinye izinto eziguga. Nangona singenakubuguqula ubuso bethu, kuyanceda ukunciphisa ezi ziphumo.
Apha siza kuchaza indlela yokwenza uthotho lokuzilolonga ubuso ngenyathelo ngenyathelo ukuze ubuso bakho bubonakale bungcono.
1 Imisipha yobuso
2 Yeyiphi imithambo yobuso ebhetele
3 Imiba ekufuneka ithathelwe ingqalelo kwimithambo yobuso
Yikholwe okanye hayi, sinokuphinda sisebenze izihlunu zobuso. Nangona ezi zihlunu zingasetyenziswanga ngendlela efanayo nawo wonke umzimba, kodwa zinako ukusetyenziswa. Ukuba senza umthambo ebusweni ixesha elide, siya kuyibona imiphumo.
Ayisiyiyo kuphela iminyaka, kodwa ubunzima esinabo kunye nenqanaba leemeko zenqatha ebusweni bethu. Singaba ngamadoda amhle kodwa, ukuba siyatyeba kwaye siqala ukugcina amanqatha esilevini esiphakathi nasezidleleni, siya kubangela ukonakala kobuhle. Kwelinye icala, kunokwenzeka ukuba, ukuba ngesiquphe siphulukana nobunzima obuninzi kwaye sibhitye kakhulu, kuyayithwala ebusweni esiyibonisayo.
Ukuziqhelanisa nobuso kuluncedo olukhulu ekupheliseni iimpembelelo zobudala kwaye zisenza sibi ngaphandle. Nangona singenakuyiqaphela, ebusweni sinemisipha engaphezulu kwama-30 esiyisebenzisa yonke imihla. Ke sinokuvula kwaye sivale imilomo yethu, sihambise iimpumlo zethu, sivale kwaye sivule amehlo, njl. Ezi zihlunu zinokusetyenzwa kwakhona ukuba sifuna ukuba sincinci kwaye sibahle ixesha elide.
Ukuba sisebenza izihlunu zobuso, siya kube silungisa ulusu lobuso bethu kwaye siya kubathintela ekubeni buguquke ngenxa yokuwohloka, njengoko sizuza iminyaka yobomi. Ayisiyiyo kuphela injongo yobuhle njengoko unokucinga. Ukuba siziqhelanisa nezi zihlunu, siya kukhuthaza ukuhamba kwegazi okungcono. Oku kuya kusinika umbala ongcono kunye neethoni yesikhumba kwaye kuya kunceda ukulibazisa ukubonakala kwemibimbi kunye nemigca emihle.
Baninzi abantu abadumbileyo imimandla ejikeleze amehlo ngokudinwa kunye / okanye uxinzelelo. Ngale mizobo yobuso iziphumo ziya kuncitshiswa.
Yeyiphi imithambo yobuso ebhetele
Ukuba sifuna ukuba nobuso obugudileyo kunye nolusu lwe-taut kunye nemibimbi embalwa, kufuneka sisebenze izihlunu zethu. Ukuqhuba le mithambo, siza kwenza ezinye zeyona ntshukumo zilula nezaziwayo ezikhoyo. Nalu uluhlu lwezinto ezilungileyo ukuzenza kunye nendlela yokwenza.
Bhengeza izikhamiso ngegama elinamandla. Kwisikhamiso ngasinye, siya kuvula umlomo wethu kabukhali kwaye sibambe isandi sesikhamiso ngasinye imizuzwana emi-3 ukuya kwemi-5. Lo msebenzi usetyenziswa ngokubanzi kule miboniso kubantu abaninzi apho ufuna ukulungiselela iscript esigqibeleleyo.
Siza kuyitywina imilebe yethu kwaye sigcwalise imilomo yethu ngomoya. Oku kuya kusinceda ukuba solule kwaye siqinise izihlunu kule ndawo. Ukuba nezihlunu zoluliwe kuya kusinceda sinciphise ukwenziwa kwemibimbi kwixesha elizayo.
Okulandelayo, omnye umthambo kukuvula umlomo wethu ubanzi kangangoko sinako (ngaphandle kokuzenzakalisa) size siwuvale. Xa siyivala, siya kuyitywina imilebe ngokungqongqo kangangoko sinako.
Uncumo oluguqulweyo. Ukwenza oku, siza kubeka imilebe ukuze sikwazi ukusebenzisa izihlunu zobuso. Izihlunu zentamo ziya kusebenza nazo, ke oko kuya kusinceda sithintele isilevu esiphindiweyo. Isilevu esiphindwe kabini yinto enento yokwenza nenqatha esinalo. Nangona kunjalo, ngokwenza le mithambo kunokuncitshiswa.
Siza kubeka iminwe ukusuka kwiikona zomlomo ngaphandle kwaye siyicinezele kakuhle. Ngoku zama ukwanga nokuba awukwazi. Lo msebenzi uya kusebenzisa yonke imilebe kunye nomhlathi.
Sibeka iminwe yethu kwiinkophe kwaye siza kwenza uxinzelelo oluncinci olusithintelayo ekufikeni sifinganise ubuso kunye nokuvala amehlo ethu. Ngalesi sikhundla kwaye siya kuzama ukufinga iintsimbi nangona singenako. Nje ukuba senze lo msebenzi, siya kwenza ngokuchaseneyo. Siza kubeka iminwe ukuxhathisa ukuphakamisa amashiya. Yonke le ntshukumo iya kunceda ukuphucula izihlunu ebunzi nakwindawo yamehlo.
Imiba ekufuneka ithathelwe ingqalelo kwimithambo yobuso
Ukuba ufuna ubuso bakho bube bobomntu omncinci ixesha elide kangangoko kunokwenzeka, kubalulekile ukuba uthathe ingqalelo kubungakanani bokusebenza kwezi zihlunu kunye nexesha lazo. Kungcono ukuziqhelanisa nale mithambo imbalwa Amaxesha ama-3 ngeveki kunye nexesha elipheleleyo phakathi kwe-10 kunye nemizuzu ye-15. Njengoko ubona, ayisiyonto ethatha ixesha elininzi kwaye inokunika izibonelelo ezininzi. Elinye inkohliso abantu abayenzayo ukuze bangalibali le mithambo kukuyenza ngaphambi kokuhlamba. Yima esipilini wenze imithambo. Emva koko hlamba ukhulule izihlunu ezisebenze ngelo xesha.
Kubalulekile ukujonga esipilini ngelixa usenza imithambo. Oku kunceda ukugxila kakuhle kwimisipha esisebenza kuyo kwaye singavumeli ezinye izihlunu ziphazamise iinzame zomntu. Ke, siya kuba nakho ukugxila ngcono kumzamo esiwenzayo.
Ukuba ufuna ukufumana iziphumo ezingcono xa usebenza kwindawo esembindini nasezantsi ebusweni, kulula ukuba ukhulule amehlo akho. Ngale nto, siya kwandisa umsebenzi kwimisipha kwaye siya kuyenza ukuba ijolise ngakumbi.
Khumbula ukuba le mithambo ilandela indlela efanayo yokuphila njengezinye izihlunu zomzimba. Kuya kuba lilize ukwenza le mithambo ukuba awunayo indlela yokuphila esempilweni. Yitya kakuhle kwaye ungasebenzisi gadalala ukutya okugqityiweyo, ungafumani mafutha, ulale kakuhle kwaye ungasebenzisi kakubi utywala. Ukuhlala kude kube semva kwexesha okanye ukuhlala uxinezelekile zezinto ezimiselweyo zokuguga ngaphambi kwexesha.
Ngokuzilolonga ebusweni uya kuba nakho ukulibazisa iziphumo zokwaluphala kwaye ubuso bakho buya kukwazi ukugcina ulusu oluqinileyo nolomncinci. Eyona nto ibalaseleyo kuko konke kukuba ukuzilolonga kukhululekile kwaye unokwenza ngaphandle kweekhrim kunye namayeza okuthambisa.
Ndiyathemba ukuba ngale mithambo yobuso ungayiphucula inkangeleko yobuso bakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ukuzilolonga ebusweni
Suit kunye slippers